Su'aal: Nabro ama Kuus ka soo baxo qadaadaka?
Author Topic: Su'aal: Nabro ama Kuus ka soo baxo qadaadaka? (Read 2121 times)
« on: January 29, 2015, 12:41:59 PM »
1.Asc bahda barnamijka cafimadka wan idiin mahadcelinayaa marka hore, su'aashayda waxay tahay: mudo kabadan 10sano ayaa waxaa iga soo baxa nabro madaxa qaybta danbe ee qadaadka awal hal meel ayay ahaan jirtay lakin hada dhawr ayay noqdeen bishiiba 1mar ayuu soo baxaa wuu xanuun badanyahay ugu yaraan asbuuc ayuu ihaynayaa oo madaxa dhan ila xanuuni oona dhinacaas useexan karin kadib wuxuu samaystaa malax markii malaxdaas la iga dhiijiyo waan fiicnaadaa nabarkiina tartiib tartiib ayuu unoqdaa sidaas ayuuna markasta usoo baxaa, marka nabrahaas maxay noqon karaan malaga yaabaa nabrihii aad kasheekayseen inay xariir laleeyihiin?
2.suaasha 2baad walalkey waxaa asagana marmar qadaadka meesha geeska ah ee kuusan ayaa soo bararta wayna xanuuni lama taaban karo wax af ah ma midab ahna malahan markaad taabatana waa adayg kadibna way iska baaba'daa marka taasna maxay noqon kartaa?
Aad ayaad umahadsantihiin.
Re: Su'aal: Nabro ama Kuus ka soo baxo qadaadaka?
« Reply #1 on: January 31, 2015, 10:30:26 AM »
Nabro kala duwan ayaa ka soo baxo meesha tinta iyo madaxa iska galaan qeybta dambo ee madax, waxaa habboon in aad tustid takhtar maqaar si uu u arko nabarrada markay soo baxaan, dhowr cudur ayaa keeni karo in muddo intaa la eg ay nabro kaa soo baxaan kadibne ay laabtaan.
Su'aashaada labaad meesha aad tilmaantay ee soo kusuan, qadaadkane ku aadan, marmarne baaba'do marmarne soo kusuato oo daqnasho leh, carurutane u badan waa qanjirka qadaadaka ku jira uu bararan, waxyaabaha barariyane waxaa ka mid ah infakshan ku dhaca dhuunta, quumanka, dhegaha ama qoorta meel ka mid ah.
Waa calaamad lagu garto in caruurta ay jirkooda la dagaalamayaan jeermis u dhaw qanjirkaa bararan, haddii tusaale ahaan cunuggaaga qabo quumana soo noqnoqdo ama dhagaha ay dillaacsan yihiin wuu bararaa qanjirkaas.
Fadlan la xiriir takhtar caruurta ah si loogu qoro daawo lagula dagaallamo jeermiska.
Views: 18002 June 16, 2009, 10:44:01 PM
Views: 4070 August 26, 2011, 08:59:14 PM
Views: 12107 February 20, 2013, 01:17:28 AM
Views: 2416 February 26, 2016, 09:04:59 PM
Views: 7938 November 10, 2012, 03:33:55 PM